Nagu saabsan - Aina Laydhka Teknolojiyada (Shanghai) Co., Ltd.
Teknolojiyada Laydhka Aina (Shanghai) Co., Ltd.
Aina-4 Technologies (Shanghai) Co., Ltd. waa shirkad gaar loo leeyahay oo xaddidan kana diiwaan gashan magaalada Shanghai, Shiinaha. Waxay ku takhasustay R&D, naqshadeynta, soo saarista, iyo suuqgeynta ilaha ka baxa iftiinka iyo qalabka nalalka. Waa shirkad ay aasaaseen afar (4) shirkadood oo hormood u ah laydhka, iyaga oo kheyraadkooda isu keenaya si ay u soo saaraan wax soo saar iyo adeegyo abuuraya waaritaan aan ku koobnayn oo keliya deegaanka, laakiin sidoo kale dhaqaalaha iyo bulshooyinka ay shirkaddu la korayso.
Alaabooyinka Aina-4 waxay ka tarjumayaan falsafadda ganacsiga ee kor u qaadista himilooyinka macaamiisha iyo iyaga oo siinaya xorriyadda hadalka shakhsi ahaaneed iyada oo loo marayo naqshadeynta tayada ugu fiican, agabka, iyo hababka wax soo saar, isla mar ahaantaana la hubinayo inay ka tagayso saameyn togan dhammaan daneeyayaasha bulshada, dhaqaalaha, iyo deegaan ahaan.
Soo-saar: Awood wax soo saar xoog leh iyo Awood
• Nalalka: 10 khadadka wax soo saarka, 3 sadar oo loogu talagalay Baako otomaatig ah, 150000 kumbiyuutar maalintii;
• T8 Tubes lines 15 khadadka wax soo saarka ， 200000 kumbiyuutar maalintii;
• Nalalka Filament: 6 khadadka wax soo saarka, 150000 kumbiyuutar maalintii;
• Khadadka Waxsoosaarka Kale: 4 xariiq oo wax soo saar ah, 20000 kumbiyuutar maalintii
• Waxaan haynaa in kabadan 30 injineero, oo leh takhasusyadooda laxiriira elektaroniga, optics-ka, baakadaha ilayska iftiinka iyo qaab dhismeedka nalka.
• Waxaan haynaa mashiinno tijaabo oo dhameystiran si loo hubiyo kalsoonida sare iyo waxqabadka sare ee soosaarka tirada.
Isku xirnaanta saadka si loo hagaajiyo tayada nalalka, loo kordhiyo falcelinta adeegga, iyo in la yareeyo kharashka
• Silsiladda Alaab-qeybiyeyaasha T8: 4 cutub oo mashiin sawir qaadis ah, 2 foorno, 720000 kumbiyuutarada tubbada maalintii
• Khadadka wax soo saarka xereen ee ku xereen biyaha: 200000 kumbiyuutar maalintii
• Khadadka Wadayaasha: Waxaan leenahay khadadka wax soo saarka oo dhameystiran oo loogu talagalay darawalka, laga bilaabo SMT, qalabka korontada ku xirma, tijaabinta ilaa gabowga, 200000 unug maalintii
• Waxaan ku leenahay saldhig wax soo saar oo ku kala yaal Anhui iyo Shenzhen labadaba.
• Saldhigga Shenzhen badanaa waxaa loogu talagalay nalalka highbay, nalalka xargaha iyo nalalka kale ee warshadaha iyo ganacsiga.
• Waxaan haynaa sannado badan oo ah adeegga OEM iyo ODM iyo khibrad maamul.
• Waxaan hubin karnaa inaan buuxinno shuruudo kala duwan.
• Qiimaha: Isdhaxgalka alaab-qeybiyeyaasha dartiis, waxaan leenahay heer qiime kala duwan oo nalalka ah si aan ula kulanno suuqyo kala duwan
• Waxqabadka Badeecada: Iyadoo lagu saleynayo shuruudaha suuqa, waxaan ku bixin karnaa ilaa 5 sano oo dammaanad ah nalalka qaar.
• Waxaan ku gaari karnaa 200LPW mashaariicda qaar.
• Waxyaabaha caadiga ah, waxaan ku dari karnaa darawal degdeg ah si aan ula kulanno isticmaalka gaarka ah ee nalalka.
• Iyada oo ku saleysan shuruudo kala duwan, waxaan ku dari karnaa darawal dareeraha yaraa iyo dareemayaasha nalalkayaga.
• Iyadoo lagu saleynayo shuruudo kala duwan, waxaan ku bixin karnaa shahaadooyin kala duwan si loo buuxiyo shuruudaha kala duwan ee suuqyada, sida heerka Mareykanka ama heerka Yurub.
Waxaan aad u khibrad badanahay injineerada R&D waxaanan leenahay awood xoogan oo aan ku qaban karno mashaariicda ODM.
Waxaan leenahay xariiqyo wax soo saar oo kala duwan oo loogu talagalay nalalka kala duwan. Waxay ka dhigi kartaa waqtiga dhalmada mid ka dhakhso badan kuwa kale.
Nidaamyada wax soo saarka otomaatigga ah waxay hubiyaan tayada iyo faa'iidooyinka dhaqaalaha.
Waaxdayada Kormeerka Tayada waxay ka caawin kartaa macaamiisha inay hubiyaan dhamaan walxaha kahor rarka.
Waxaan bixin karnaa adeegga OEM / ODM. Macaamiisha ayaa adeegsan kara summadooda.
Weligaa ha u oggolaan in macaashku kaa hor istaago samaynta waxa saxda ah ee macaamilka.
Macaamiisha sii heshiis wanaagsan oo cadaalad ah.
Had iyo jeer sameyso cilaaqaad waara.
Had iyo jeer raadso dariiqooyin u fududeynaya macaamiisha inay nala ganacsadaan.
La xiriir macaamiisha - waxay sifiican u yaqaanaan gaar ahaan arjiga dhabta ah.
Shumac iyo sharaf - waqti kasta!
Tiri ducooyinka - waligaa ha iloobin inaad ugu mahad celiso macaamiisha ganacsigooda qiimaha badan!